श्रीमती महि’नावारी हुँदा श्रीमानले के गर्ने ? हरेक पुरुषले पढ्नै पर्ने – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Tips/श्रीमती महि’नावारी हुँदा श्रीमानले के गर्ने ? हरेक पुरुषले पढ्नै पर्ने
मूडलाई बुझ्नुहोस्ः महिनावारी हुँदा महिलामा चिड्चिडापन बढ्ने गर्दछ । उनको मूड बुझेर आपसी सहयोग गर्नुहोस् । हट वाटर ब्याग दिनुहोस्ः महिनावारी हुँदा पेट दुख्नु साधारण कुरा हो । हट वाटर ब्यागमार्फत पेट दुखाईबाट राहत पाउन सकिन्छ ।
डार्क चकलेट खुवाउनुहोस्ः डार्क चकलेटमा पाइने फ्लेवनाइड्सले मूडलाई राम्रो बनाउने गर्दछ ।
तरकारी र फलफूल खुवाउनुहोस्ः केरा,मेवालगायतका फलफूल र हरिया तरकारीले महिनावारीको समस्यालाई कम गर्दछ ।
मसाज गर्नुहोस्ः महिनावारीका बेला महिलालाई कम्मर दुख्ने लगा यतका समस्या हुने गर्दछ । तपाईंले हल्का हातको मसाजले उनलाई राहत दिनेछ ।
व्यायाम गराउनुहोस्ः हल्काफूल्का व्यायाम वा योगाबाट पेट र ढाड दुखाईबाट राहत प्राप्त हुन्छ ।
धेरैभन्दा धेरै पानी पिउन लगाउनुहोस्ः महिनावारी हुँदा शरिरमा जति पानी हुन्छ, पीडा त्यति नै कम हुने गर्दछ ।
आराम गर्न दिनुहोस्ः तपाईंको पार्टनरलाई महिनावारी हुँदा धेरै काम गर्न नदिनुहोस् । आराम गर्दा समस्या कम हुनेछ । चिया–कफी वा मसालेदार
खानेकुरा नदिनुहोस्ः मसालेदार खानेकुरा र क्याफेनले महिना वारीको पीडालाई बढाउने गर्दछ ।डाक्टरलाई भेट्नुहोस्ः यदि रक्तश्राव अत्यधिक भइरहेको छ भने डाक्टरलाई भेट्न जानुहोस् ।